“Waxaan rajeynayaa inaan ka garab ciyaaro Cristiano Ronaldo” – Neymar Jr – Gool FM
Ahmed Nur May 12, 2021
(Paris) 12 Maajo 2021. Ciyaaryahanka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa xaqiijiyay inuu rajeynayo inuu ka garab ciyaaro Cristiano Ronaldo.
Hadalka xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa wuxuu imaanayaa maalmo kaddib markii uu cusbooneysiiyay qandaraaskiisa kooxda Paris Saint-Germain.
Wargeyska “Marca” ayaa dabacay wareysi uu bixiyay Ciyaaryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan doonayaa inaan ka garab ciyaaro Cristiano Ronaldo, waxaan horey ula soo ciyaaray ciyaartoy waa weyn sida Lionel Messi iyo Kylian Mbappé, laakiin wali kama garab ciyaarin Ronaldo.”
intaas kaddib Neymar Jr oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku sii daray:
“Waxaan doonayaa inaan ku guuleysto Koobka Adduunka, tani had iyo jeer waxay aheyd riyadeyda ugu weyn.”
“Laakiin sidoo kale waxaan doonayaa inaan wax walba kula guuleysto kooxda Paris Saint-Germain.”
Si kastaba ha ahaatee, Neymar Jr ayaa qandaraas cusub u saxiixay Paris Saint-Germain ilaa iyo 2025, xilli xiddiga reer Brazil uu ku biiray PSG sanadkii 2017, isagoo kaga yimid kooxda reer Spain ee Barcelona.
Tan iyo markaas, Neymar wuxuu ka qayb qaatay 113 ee kooxda PSG tartamada oo dhan ah, wuxuu dhaliyay 86 gool wuxuuna caawiyay 51 gool, isaga oo kooxda kula guuleystay saddex jeer horyaalka Ligue 1 dalka France, iyo Coupe de France oo 2 jeer ah, wuxuuna u soo baxay Finalka Champions League hal mar.
Aymeric Laporte oo u ciyaari kara xulka qaranka Spain Euro202...(Maxay FIFA ka qabtaa?)